Dowladda Ugaandha oo shaacisay in ciidamo dheeraad ah ay geysay dalka Soomaaliya
May 5, 2012 - Written by
Wasaaradda Gaashaandhiga ee dalka Ugaandha ayaa shaac ka qaaday in ciidamo dheeraad ah oo ka socda dalkooda ay u soo direen dalka Soomaaliya iyagoo xusay in ciidanka dalka Soomaaliya in ay gaarsiiyeen ilaa 8000 oo askari. Ciidanka AMISOM ee hadda ku sugan Soomaaliya ayaa waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 17.000 oo askari iyagoo maalin walba soo kordhiya ciidankooda taas oo sabab u ah iyagoo gacanta ku haya Dekkada magaalada Muqdisho iyo Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Afhayeen u hadlay Ciidanka Milateriga ah ee dalka Ugaandha Col. Flix Kula yigye ayaa saxaafada u xaqiijiyey in ciidamo ka socda dalka Ugaandha ay mar hore ku biireen ciidanka AMISOM ee ay hogaaminayaan dalalka Ugaandha iyo Burundi . Col.Flix ayaa ku dooday in ciidankoodu ay wax ka qabanayaan Nabadgelyada dalka Soomaaliya isagoo xusay in ay xoojinayaan ciidanka DFKM.
Afhayeen u hadlay Ciidanka Milateriga ah ee dalka Ugaandha Col. Flix Kula yigye ayaa ku nuuxnuuxsaday in ciidanka AMISOM ay qab sadeen dhamaan inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho guulana ay ka gaareen howl galada ay ka wadaan magaalada Muqdisho.
Ciidanka AMISOM ee ku sugan magaalooyinka Muqdisho ,Baydhabo iyo Hiiraan ayaa la daalaa dhacaya weeraro iyo dagaalo ay ku qaada yaan ciidanka ururka Al-shabaab oo dagaalo joogto ku qaada fariismaha ay ciidanka DFKM iyo kuwa AMISOM ku sugan yihiin.
272,503 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress